Fanendahana miaro vono olona Voasambotra i Abrahama
Tovolahy iray vao erotrerony 20 taona fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Abrahama no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny CSP4 Isotry teny Anatihazo Isotry ny 8 jolay lasa teo tamin’ny 3 ora tolakandro
resaka fanendahana miaraka amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana. Fantatra fa ity tovolahy voasambotra ity dia efa maro ny fitoriana mahakasika azy ao amin’ny polisin’Isotry sy Ampefiloha miaraka amin’ny fitarainan’ny olona maro eny anivon’ny fokontany izay efa misy hatrany amin’ny 73. Tsy vitan’ny manendaka moa ity lehilahy fa sady mamono no mandratra olona rehefa manao ny asa ratsiny. Raha hiverenana ny zava-misy, vehivavy mpianatra iray avy eo amin’ny sekoly Andavamamba andeha hamonjy cyber tsy lavitra ny toeram-pianarana no narahana telolahy . Ny 2 lahy mody mandeha tsotra miaraka aminy, ny 1 kosa naka avy hatrany ny entana teny an-tanan’ilay vehivavy sady nanambana antsy ka lasa tamin’izany ny finday 1. Niantso ny anadahiny avy hatrany ilay voaendaka mba hanampy azy ; ity farany indray avy eo no niantso ny polisin’ny CSP4. Nitsofoka tany Anatihazo Isotry ilay olon-dratsy ka nifanojo tamin’ireo mpitandro ny filaminana. Voasambotra ny iray tamin’izy ireo ary ny antsibe izay nampiasainy dia natsipiny tany anaty rano.